Ethiopia oo sheegtay inay taageerayso Somalia ilaa ay nabad ka dhalanayso. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Ethiopia oo sheegtay inay taageerayso Somalia ilaa ay nabad ka dhalanayso.
Ethiopia oo sheegtay inay taageerayso Somalia ilaa ay nabad ka dhalanayso.
Ra’iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Hailemariam Dessalegn ayaa sheegay in dowladdiisa ay sii wadi doonto taageeridda ay siinayso dalka Somalia ilaa dalkaas ay ka dhalanayso nabad laysku haleen karo si loo xaqiijiyo amaanka geeska afrika.
Wuxuu intaas ku daray Ra’iisul Wasaare Hailemariam Dessalegn inay ka go’antahay dowladdiisa in ay sii wado dadaalada nabadda dalka dariska la ah isla markaasna la horumariyo amaanka dalalka ku yaallo gobolka.
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Hailemariam Dessalegn ayaa hadalkaan ka sheegay kulan uu la qaatay shalay oo isniin ahayd dhigiisa dalka Somalia Cabdi Faarax Shirdoon oo booqasho ku joogo magaalada Adis Ababa ee dalka Ethiopia.
Hailemariam Dessalegn ayaa sheegay in dowladda itoobiya ay kaalin wanaagsan ka qaadatay xaaladda dalka Somalia iyo sidii ay gacan ugu gaysan lahayd nabadeenta dalka Somalia.
Sidoo kale Waxaa kulankii shalay ay wada yeesheen Ra’iisul Wasaaraha Somalia iyo Ethiopia ka hadlay Cabdi Faarax Shirdoon oo ah Ra’iisul Wasaraha Somalia waxaana uu sheegay in dadka iyo dowladda Ethiopia ay garab taagnaayeen shacabka Somalia iyo dalka Somalia oo ay ka qeyb qaateen nabadeenta dalka Somalia.
Ra’iisul Wasaaraha Somalia Cabdi Faarax Shirdoon ayaa booqasho afar maalin ku tagay magalada Adis Ababa ee dalka Ethiopia.
Previous articleMareykanka oo Tababaro iyo Hub Siinaayo Somalia.
Next articleMaamulka Cusub Gobolka Hiiraan oo xilka la wareegay.